GABA ntụ ntụ (56-12-2) ụlọ nrụpụta nrụpụta nrụpụta
Gamma-aminobutyric acid (GABA) ntụ ntụ bụ neurotransmitter dị egwu nke na-achịkwa mkpali na-adịghị mma, ụda akwara, na-eto eto sel, mmepe ụbụrụ, na ọnọdụ. N'oge mmepe, GABA na-arụ ọrụ dị ka ihe na-akpali akpali ma na-agbanwe mgbe e mesịrị na ọrụ mgbochi. GABA na-egosiputa nchegbu, mmegide mgbochi, na ọrụ amnestic, na -eme ka izu ike ma belata nchekasị na ntọala. Ọrụ ya bụ isi na-ebelata mkpali na-adịghị na nhụjuanya n'ime usoro ụjọ ahụ. A na-ere GABA dị ka ihe mgbakwunye nri.
Gamma-aminobutyric acid (GABA) Ozi ntụ ntụ
aha Gamma-aminobutyric acid (GABA) Ntụ ntụ
Melting Point 195 Celsius C (dec.) (Lit.)
ọdịdị White ma ọ bụ ìhè Yellow
ngwa Onye na-egbochi neurotransmitter dị mkpa.
Gamma-aminobutyric acid (GABA) Ntụ ntụ 56-12-2 General Description
Gamma-aminobutyric acid (GABA) ntụ ntụ bụ onye na-egbochi neurotransmitter na usoro ụjọ nke anụ ahụ. Ọ na-ekere òkè n'ịchịkwa mkpali neuronal n'ime usoro ụjọ ahụ. N'ime ụmụ mmadụ, GABA bụkwa onye na-ahụ maka ịhazi akwara. Ọ bụ ezie na ọ bụ kemịkalụ bụ amino acid, a naghị akpọ ntụ ntụ GABA dị ka ndị dị na sayensị ma ọ bụ obodo ahụike, n'ihi na okwu a bụ "amino acid," nke ejiri ya na-enweghị ntozu, na-ezo aka na alpha amino acid, nke GABA abụghị, ma ọ bụ a na-etinye ya na protein. N'ọkpụkpụ ọrịa na-egbu mmụọ na ụmụ mmadụ, GABA absorption na-enwe nsogbu site na irighiri akwara mebiri site na ọnya mgbatị ahụ dị elu, nke na-eduga na hypertonia nke akwara nke akwara ndị ahụ na-enweghị ike ịnabata GABA.
Gamma-aminobutyric acid (GABA) Ntụ ntụ 56-12-2 History
Gamma-aminobutyric acid (GABA) Ntụ ntụ 56-12-2 Mihe eji eme ihe Of Action
Gamma-aminobutyric acid (GABA) nwere ike na-anọchite anya onye nrụpụta kachasị mkpa nke nchịkwa CNS (hụkwa Isi nke 15). Typesdị abụọ nke GABAergic inhibition (tupu- na postsynaptic) jiri otu ụdị GABAA subtype, nke na-eme site na iwu nke ọwa chloride nke akpụkpọ anụ neuronal. Gdị ihe nnabata GABA nke abụọ, GABAB, nke bụ protein G-gbakọtara a naghị ewere dị ka ihe dị mkpa na nghọta usoro nke hypnotics. Ntinye nke onye na-anabata GABAA site n'aka onye agonist na-eme ka nzaghachi synaptic na-egbochi ihe mgbochi nke etiti na GABA site na hyperpolarization. N'ihi na ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile, etiti akwara na-enweta ụfọdụ ntinye GABAergic, nke a na-eduga na usoro nke ọrụ CNS nwere ike ịda mba. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị agonist na-arụ ọrụ nke GABAergic interneurons nke na-egbochi akụkụ nke monoaminergic nke ụbụrụ ụbụrụ, a ga-ahụ ọrụ hypnotic. Ihe akwara neuronal a kapịrị ọnụ na mpaghara ụbụrụ dị iche iche nke GABAA agonist na-aga n'ihu na-akọwawanye nke ọma.
Gamma-aminobutyric acid (GABA) Ntụ ntụ 56-12-2 ngwa
GABA na-arụ ọrụ site na ịhazi ụbụrụ na akwara site na igbochi ọtụtụ akwara na-arụ ọrụ na ụbụrụ. Norepinephrine / adrenaline gabigara oke nwere ike ime ka ụbụrụ anyị nwee ahụ erughị ala, nrụgide, na ụjọ.
Ahụ anyị maara ihe n'ọnọdụ a, ọ ga-arụ ọrụ iji wepu nke a site na ịhapụ GABA, nke ga-egbochi adrenaline a. Gbakwunye GABA supplementation nwere ike ịga ogologo oge iji nyere ahụ aka na mgbochi a, na imeri abalị nke ịmịgharị na ntụgharị.
Na-enweghị GABA, mkpụrụ ndụ akwara na-agbakarị ọkụ ọkụ kwa mgbe kwa mgbe, nke ga-ebute nsogbu nchekasị na ọbụna ọnọdụ dịka ị likeụ ọgwụ ọjọọ, isi ọwụwa, na ọrịa Parkinson.
Ihi ụra dị oké mkpa maka ndị na-eme egwuregwu n'ihi na nke a bụ oge mgbe mgbake na-ewere ọnọdụ. Ndị bodybuilders nwere ike irite uru site na GABA iji nyere ha aka izu ike mgbe ha gbasịrị mgbatị siri ike, yana iji nyere ha aka ime ka ụra ha ka mma dị ka akụkụ nke mgbakwunye.
Gamma-aminobutyric acid (GABA) Ntụ ntụ 56-12-2 Nchọpụta ndị ọzọ
GABA dị ka mgbakwunye:
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ GABA naanị, usoro ahụ nwere ike ịdị site na 250mg ruo 750mg kwa ụbọchị. Dika akuku nke ogugu ndi ozo dika nke ha dika ha na aru oru na ihe ndi ozo dika melatonin.
Gamma-aminobutyric acid (GABA) Ntụ ntụ 56-12-2 Reference
Mgbochi na obi ụtọ n'ihi gamma-aminobutyric acid na etiti usoro ụjọ. Hayashi, Nature 1958, 182, 1076
Omume obi ụtọ nke GABA n'oge mmepe: ọdịdị nke nurture (nyochaa) Y. Ben-Ari, Nat. Rev. Neurosci. 2002, 3, 728
GABA na GABA ndị natara na sistem ụjọ na akụkụ ndị ọzọ (nyocha) M. Watanabe, K. Maemura, K. Kanbara, T. Tamayama, H. Hayasaki, Int. Rev. Cytol. 2002, 213, 1
Abdou AM, Higashiguchi S, Horie K, et al. Ighaghasị na mmelite mmetụ nke nchịkwa gamma-aminobutyric acid (GABA) na ụmụ mmadụ. Ihe nkedo. 2006; 26 (3): 201-8.